अब १८ लाखमै तयार हुने भयो २ तले घर | Mero Sewa: Find any Business and Services in Nepal
अब १८ लाखमै तयार हुने भयो २ तले घर
By Merosewa February 21, 2018
नेपालमा २०७२ सालको भूकम्प पछि भूकम्प प्रतिरोधी एवं उच्च प्रविधियुक्त घर बनाउन शुरु गरेका छन् । निर्माण सामाग्रीमा बढ्दो महँगीसँगै सस्तोमा घर बनाउने उपायको खोजीमा मानिसहरु लागेका छन् । हालै मात्र पन्चकन्या समुहले नेपालमा पहिलो पटक ‘स्टक्चर स्टिल’ को नामबाट ग्याल्भनाइज स्टिलको उत्पादन गरेर आकर्षक घर बनाउने नयाँ प्रविधि भित्र्याएको छ ।
भूकम्पीय जोखिम भएका अन्य विभिन्न देशहरुले ग्याल्भनाइज स्टिलको प्रयोग गरेर घरहरु निर्माण गर्ने गरेका छन् । ग्याल्भनाइज निकै स्टिल हलुका हुने भएकोले एक ठाउँबाट अर्को ठाँउसम्म ढुवानी गर्न सहज हुन्छ । यस प्रविधिबाट तपाईको जग्गा र अवश्यकता अनुसार ४ तलासम्मको घर निर्माण गर्न सकिन्छ ।
मूल्य र निर्माण अवधि ?
कम्पनीले यसको न्यूनतम मूल्य प्रति वर्गफिट २२०० रुपैंया देखि शुरु हुने जनाएको छ । यस मूल्य अनुसार १३०० स्वायर फिटको २ तले घर बनाउँदा करिब १८ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ । निर्माण खर्चमा ३० प्रतिशत कम पर्ने यसको आयु ५० वर्षसम्म हुने कम्पनीको दाबी छ । सामान्यतयः २ तलाको घर १५ देखि २० दिनमा निर्माण गर्न सकिने यस्ता घरको डिजाइन तुरुन्तै परिवर्तन गर्न सकिने र आगलागी तथा भूकम्पको जोखिमसमेत रहँदैन ।
के आफूले चाहेको जस्तो बनाउन सकिन्छ ?
यस प्रविधिबाट सबैखाले घरहरु बनाउन सकिन्छ । गाउँघरका पुराना शैलीका घर देखि शहरका आधुनिक घरहरुसमेत निर्माण गर्न सकिन्छ । यसबाट औद्योगिक भवन, विद्यालय भवन, हस्पिटल, रेष्टुरेन्ट एण्ड बार, पार्टी प्यालेस आदि जस्ता पूर्वाधारहरु सजिलै निर्माण गर्न सकिन्छ । कम्पनीले हालसम्म अरुण तेस्रो आयोजनाको फार्म हाउस देखि १०० भन्दा बढी घरहरु यस प्रविधिबाट निर्माण गरिसकेको छ ।
One response to “अब १८ लाखमै तयार हुने भयो २ तले घर”
Seems like it’s Nice and safe.
Different Banks extended Branch Office July 31, 2018
अब १८ लाखमै तयार हुने भयो २ तले घर February 21, 2018
What benefit will you get after listing to merosewa? September 4, 2014
News about Merosewa published in Saptahik September 4, 2014
Other News published by Gorkhapatra, Annapurna and others October 11, 2013